လှူဒါန်းရန် - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign
GCPE ၏ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအနာဂတ်ကိုထောက်ပံ့ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာထပ်တလဲလဲအလှူရှင်ဖြစ်လာရန်ဖြစ်သည်။ တစ်လလျှင်ဒေါ်လာအနည်းငယ်သာလှူဒါန်းခြင်းဖြင့်အနာဂတ်အတွက်ထိရောက်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်ကူညီနိုင်သည်။ ထပ်တလဲလဲအလှူရှင်ဖြစ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုသုံးပါ။
ချက်လက်မှတ်ဖြင့်လှူဒါန်းရန် ကျေးဇူးပြု၍ ချက်လက်မှတ်များကိုပေးချေပါ။ “ IIPE-GCPE / AFGJ”
(*"AFGJ"ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်! မှတ်စုတိုတွင်“ IIPE / GCPE” ကိုလည်းထည့်သွင်းရန်အကြံပြုပါသည်။ )
Global Justice များအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့
225 E ကို 26 စိန့် - Suite 1
တာက်ဆန်, AZ 85713
optional (ဒါပေမယ့်အထောက်အကူဖြစ်စေ): သင့်ရဲ့စစ်ဆေးမှုများနှင့်အတူမေးလ်တစ်ပုံစံကို download လုပ်ပါရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.
Credit Card မှလှူဒါန်းပါ
သင်၏လှူဒါန်းမှုကိုထပ်တလဲလဲပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် GCPE ကိုရေရှည်တည်တံ့အောင်ကူညီနိုင်သည်။